Aloha midika hoe manalavitra an'i Hawaii: Curfew manan-kery any Kauai
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Aloha midika hoe manalavitra an'i Hawaii: Curfew manan-kery any Kauai
Tsy mahafinaritra intsony ny fizahan-tany any Hawaii. T amoron-tsiraka banga, ivon-toeram-pivarotana miaraka amin'ny 90% amin'ireo magazay mihidy, ary ny olona eo an-toerana izay maniry anao tsy ho eo, fa tena mila ilay orinasa. Toe-javatra tsy azo atao izany any amin'ny faritra fizahan-tany toa an'i Hawaii.
Ny torohevitra tsara indrindra ho an'izay mikasa hanao vakansy any Hawaii dia ny manalavitra. Ny ben'ny tanànan'i Kauai Derek Kawakami dia nanambara androany fa nanatanteraka ora tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerana ny nosy manomboka ny zoma. Hihatra manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 5 maraina isan'andro ny ora tsy ampoizina mandrapahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, raha ny filazan'ny maika
Ho fanampin'izany, ny fitsangatsanganana fiaramanidina mankany sy avy any Lihue dia voafetra ho an'ny filàna ilaina ihany. "Mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny, ny mpitsidika dia tsy tokony handeha ho any amin'ny nosintsika hialana voly na fialan-tsasatra," hoy izy. “Manao vakansy i Kauai!”
Hihatra manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 5 maraina isan'andro ny ora tsy ampoizina mandrapahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, araka ny lalàna maika napetrany. Nilaza ny tompon'andraikitra tamin'ny famoahana vaovao iray fa ny olona tsirairay ao amin'ny County Kauai dia "tsy maintsy mijanona ao amin'ny fonenany mandritra ireo ora voatondro ireo." Entanina ny indostrian'ny fialantsasatra mba hiala amin'ny marketing any Kauai ho toerana fitsidihana mandritra ity fotoana ity mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fiarahamonina.
Fanalavirana ara-tsosialy: fomba fanehoana vaovao Aloha
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina akaiky an'i Hawai'i, ny baiko federaly, ny fanjakana ary ny faritany dia mety ho hafatra sarotra ekena. Ny mponin'ny nosy dia zatra mivory miaraka amin'ny hetsika ara-tsosialy sy ampahibemaso ary maneho ny fanohanany ary aloha ho an'ny tsirairay miaraka amin'ny famihinana sy mariky ny fitiavana.
Ny tolo-kevitry ny COVID-19 dia manova ny fitsipika momba ny halaviran'ny halaviran'ny olona tokony hifanalany, fa ny aloha manjaka ny fanahy any amin'ireo nosy. Ny fanalavirana ny fiaraha-monina dia fomba fanehoana vaovao aloha. Ny fanafoanana ireo hetsika izay tsy mamela ny mpanatrika hanana elanelam-potoana farafahakeliny - mitovy amin'ny halavan'ny sandry roa - ary ny fisorohana ny fivoriana ara-batana tsy ilaina amin'ny hafa dia paikady voaporofo mba hanalefahana ny fihanaky ny viriosy. Miankina amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanarahan-dalàna avy amin'ny besinimaro anefa ny fahombiazan'ireto fandraisana andraikitra ireto.
“Mety hahatsapa ho mifanohitra amin'ny azy io, fa iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanehoana aloha ho an'ny tsirairay amin'izy ireo amin'izao fotoan-tsarotra izao dia ny tsy hifamotoana amin'ny fivoriana lehibe sy hitazonana ny elanelana azo antoka sy mahasalama, ”hoy i Bruce Anderson, talen'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawai'i. “Mila fotoana fisainana vaovao ireo fotoana mbola tsy nisy toa azy ireo. Mety salama ianao, fa ny hafa manodidina anao mety tsy dia nanam-bintana toy izany. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny halaviran'ny fiaraha-monina dia mametra ny fahafaha-misedra aretina rehetra ao an-tranonao ianao ary miaro ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamoninay. Isika rehetra dia mila mandinika ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny hafa, indrindra ireo zokiolona, ​​ireo izay manana toe-pahasalamana efa nisy ary ireo hafa mety hanimba ny fahasalamany.
Nanamarika i Anderson fa ny teknolojia dia ahafahantsika manana halavirana ara-tsosialy nefa tsy mahafoy ny fifandraisana ara-pientanam-po. “Rehefa azo atao, dia tokony hampiasa fitaovana misy amin'ny fivoriana virtoaly amin'ny alàlan'ny telefaona, takelaka na solosaina isika ho fomba hihazonana ny fifandraisana amin'ireo olon-tiana, indrindra ny kupuna amin'ny trano fikarakarana nomena ny toromarika nomen'ny Governemanta Ige mba tsy hitsidika ireo trano fitaizana be antitra, fisotroan-dronono na maharitra toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. ”
Mandritra izany fotoana izany, tsy mahafinaritra intsony ny mitsidika ny Aloha State. Marina indrindra izany raha misy mikasa ny hiantsena kely na hankafy ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana sy fisotroana mahafinaritra. Ny ankamaroan'ny fivarotana marika dia mihidy, ny tolotra fisakafoanana dia tsy maintsy manomboka rahampitso.